Nepal Bankers Association(Nepal Bankers Association) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
Nepal Bankers Association
नयाँ बानेश्वर र चुच्चेपाटीमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सको शाखा विस्तार
काठमाण्डौ । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ग्राहक सेवालाई सरल तथा सहज बनाउने उद्देश्यका साथ काठमाण्डौको नयाँ बानेश्वर र चाबहिलको चुच्चेपाटीमा आज सोमबारदेखि नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। कम्पनीले नयाँ बानेश्वरमा ४१ औँ र चुच्चेपाटीमा ४२ औँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो। नयाँ शाखाहरुको कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपककुमार...
असारको अन्तिम साता वाणिज्य बैंकहरुले गरे रु. ८२ अर्ब निक्षेप संकलन, कर्जा लगानी कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम साता वाणिज्य बैंकहरु निक्षेप संकलन तथा कर्जा परिचालनमा आक्रमण देखिएका छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) का अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्तिम साता (असार २६ गतेदेखि असार ३१ गते)सम्म वाणिज्य बैंकहरुले ८२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्। योसँगै वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४२ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ...
एक सातामै वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. ४७ अर्बले बढ्यो, रु. १५ अर्ब कर्जा लगानी
काठमाण्डौ । पछिल्लो एक सातामा वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो बिजेनस आक्रामण ढंगले बढाएको देखिएको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएन (एनबीए) का अनुसार असार १२ गतेदेखि असार १८ गतेसम्मको एक साताको अवधिमा निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा आक्रामक देखिएका हुन्। यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले ४७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्। जब कि अघिल्लो साता (असार ५...
मौद्रिक नीतिमा सीआरआरको सीमा ५०% कायम गर्नुपर्ने एनबीएको सुझाव, अन्य यस्ता छन्
काठमाण्डौ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले हाल बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दैनिक रुपमा राख्दै आएको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को न्यूनतम सीमा घटाएर ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राय पठाउँदै एनबीएले यस्तो सुझाव दिएको हो। एनबीएले सीआरआरको...
सजकताका साथ डिजिटल बैंकिङमार्फत सुरक्षित कारोबार गर्न एनबीएको आग्रह
काठमाण्डौ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले सजकताका साथ डिजिटल बैंकिङमार्फत सुरक्षित कारोबार गर्न ग्राहकहरुलाई आग्रह गरेको छ। एनबीएले आज एक सूचना जारी गरी यस्तो आग्रह गरेको हो। अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत अनधिकृत व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी ठगिरहेको एनबीएले जनाएको छ। ‘अहिले...
वाणिज्य बैंकहरुबाट ४ दिनमा रु. ४ अर्ब लगानी, के छ निक्षेपको अवस्था ?
काठमाण्डौ । असारको पहिलो ४ दिनमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी बढेको देखिएको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) का अनुसार असार १–४ गतेसम्म बैंकहरुले थप ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। गत जेठभरि भने वाणिज्य बैंकहरुले ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको असार ४ गतेसम्म बैंकहरुको कुल...
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन गत वैशाखको तुलनामा जेठमा ह्वात्तै बढेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले आज सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जेठभरि वाणिज्य बैंकहरुले ३६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्। जुन गत वैशाख महिनाको तुलनामा २५ अर्ब रुपैयाँले बढी हो। गत वैशाख महिनाभरि वाणिज्य बैंकहरुले ११ अर्ब रुपैयाँमात्र...
काठमाण्डौ । निषेधाज्ञाबीच वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी बढेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले आज सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जेठको अन्तिम साता (जेठ २२ देखि २८ गतेसम्म) वाणिय बैंकहरुको निक्षेप संकलन १३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। जेठको तेस्रो साता पनि बैंकहरुको निक्षेप १३ अर्ब रुपैयाँले नै बढेको थियो। यो जेठ...
निषेधाज्ञाबीच बढ्यो वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप र कर्जा
काठमाण्डौ । निषेधाज्ञाबीच वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी र निक्षेप संकलन दुवै बढेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) का अनुसार जेठको तेस्रो साता वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी र निक्षेप संकलन दुवै बढेको हो। गत जेठ १५ गतेदेखि जेठ २१ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुले १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्। जब कि जेठको दोस्रो साता वाणिज्य...
निषेधाज्ञाबीच वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी बढ्यो, निक्षेप भने घट्यो
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीबीच वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी बढेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) का अनुसार जेठको दोस्रो साता (जेठ ८–१४ गते) वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी १० अर्ब रुपैयाँले बढेको हो। जेठको पहिलो साता पनि वाणिज्य बैंकहरुले ५ अर्ब कर्जा लगानी गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी भने...
निषेधाज्ञाका कारण वाणिज्य बैंकहरुको बिजनेस प्रभावित, कर्जा–निक्षेप ह्वात्तै घट्यो
काठमाण्डौ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी र निक्षेप संकलन प्रभावित बनेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो एक साता (जेठ १–७ गते) सम्मको तथ्यांक हेर्दा निषेधाज्ञाले वाणिज्य बैंकहरुको बिजनेस प्रभावित भएको...
निषेधाज्ञामा बैंकहरुको कर्जामा पहिरो, निक्षेपमा उछाल
काठमाण्डौ । कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम नियन्त्रणका जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा परिचालन प्रभावित भएको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) का अनुसार वैशाख अन्तिम साता (२५–३१ गतेसम्म) वाणिज्य बैंकहरुबाट २ अर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा लगानी गरेका छन्। अघिल्लो साता भने बैंकले १५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी...
एनबीएले प्रदेशका अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट जडानमा सहयोग गर्ने
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले प्रदेशका अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने तयारी गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमणसँगै मुलुकमा अक्सिजनको हाहाकार मच्चिन थालेपछि एनबीएले प्रदेशका अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने निर्णय गरेको हो। अहिले...
डिजिटल माध्यमबाट बैंकिङ कारोबार गर्न एनबीएको आग्रह, क्यूआर प्रयोगमा जोड
काठमाण्डौ । कोभिडको दोस्रो लहर बढेसँगै नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले ग्राहकलाई डिजिटल माध्यमबाट बैंकिङ कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ। एनबीएले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ग्राहकलाई डिजिटल माध्यमबाट बैंकिङ कारोबार घरैबाट गर्न अनुरोध गरेको हो। ‘मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत एक खाताबाट अर्कोमा रकम स्थानान्तरण, खाता व्यालेन्स...
बैंक शाखाबाट अब ५ प्रकारका सेवा मात्र पाइने, रु.५० हजारभन्दा कम रकम जम्मा गर्न बन्देज
काठमाण्डौ । कोभिड संक्रमणको दोश्रो लहर तीव्र बनेसँगै बैंकहरुले आफ्नो सेवालाई सीमित गर्ने भएका छन् । अब बैंकका शाखाबाट ५ प्रकारका सेवा मात्र पाइने र सोहीअनुसार व्यवस्था मिलाउन वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले सदस्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । ग्राहकहरुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै शाखाहरुमा भीडभाड ...